Warqad Furan Oo Ku Socota Dhammaan Waxgaradka Beelaha Solomadow. | Qorilugud News 24
Warqad Furan Oo Ku Socota Dhammaan Waxgaradka Beelaha Solomadow.
Warqad Furan Oo Ku Socota Dhammaan Waxgaradka Beelaha Solomadow……..
By; Maxamed Cilmi Cali (Maxamed Cilmi Dhuub).
Waxaan Salaan hawada u marinayaa dhammaan Beesha Guud ahaan gaar ahaan inta uu Qoraalkani Gaadho Asc.
Qoraalkan waxaan kaga hadlayaa Tallooyin aan isleeyahay Maanta Reerku waa ubaahan yihiin. Waxaa maalmahan baraha wararka la Isugu gudbiyo ku badan Suldaan ama Garaad.
Waxaan doonayaa in aan ka jawaabo dhowr su’aalood oo Muhiim Ah.
Suldaan Beesha Solomadow ma ubaahan tahay?
Haddii aynu ubaahanahay ma waxaynu ubixinaa Garaad mise Suldaan.
Haddaan ka jawaabo Su’aasha ah Solomadow Suldaan ma ubaahan tahay jawaabtu waa HAA bal waxaabay ahayd inaynu doorano waqti hore oo xataa aynu maanta uga baahi badnayn oo aynu dagaal ku jirney.
Waxaanan daawaday Odayaal waxgarad ah oo Idaacadaha ka hadlaya oo leh Magaca Solomadow ayaa Suldaan ah oo uma baahnin Suldaan, Jawaab kooban Reeraha kale muxuu Magacoodu Suldaanimadii ugaga filaan waayey, kitaabka Qur’aanka ah haddaan Nebi la soo raacin ma meel mareen.
Su,aasha labaad ee ah ma Suldaan baynu u bixinaa mise Garaad waxay ila tahay in lakala leeyahay magacyada ay la baxaan dhaqanka Qabiilooyinka Soomaaliyeed markaa magaca Garaad waxaa la baxa reero kale ee maaha magac sharafeed ay Habarjeclo la baxdo ama Reer Sheekh Isaaq ba guud ahaan inkasta oo aan Qurbaha ubadanahay haddana kolay ma maqal.
Haddii Ninka doonaya ee isku magacaabay Garaad doonka aanu Reeraha Bariga inaga xiga aanu jacayl u hayn (Habar jeclo dhexdeeda wiilasha yar-yar ayaa loogu wanqalaa oo loo bixiyaa).
Tan kale markii hore ayaaba magaca Buuhoodle dheraad Inagu ahaa oo ay nasiib darro tahay in aynu Magaalo madax gobol ku sheeg aynaan tegi karin aynu ka tirsanaano oo wax Inagaga xidhnaadaan xuquuqdii shacab ahaan, maamul ahaan iyo Horumarintii deegaan ahaan aynu u daba fadhiisano shacabka reer Khaatumo oo xataa keena Idaacaddaha ka hadlayaa leeyahay Reer Buuhoodle, goormayne cid kale noqotay.
Warkayga waxaan ku soo koobayaa
Suldaan waynu u baahanahay, BAAHI weyna Beesha Solomadow way u qabtaa, balse Ragga isa soo sharaxay iyo kuwa kale ee damacaas oo kale ku jiro waa in aydin meel isugu timaadaan oo xeer beegti daacad ah oo Reeraha laga soo xulay idin kala saaraan iyada oo loo eegayo Ninka Kartidiisa, Diintiisa, Aqoontiisa waayo-aragnimo iyo Dad-wadkiisa.
Waana inaydinaan noqon Niman wax xumeeya oo Reeraha sii kala daadiya oo kala Qoqoba Cadowgeenuna ku farxo, Idinkuna aadba is caleemo saartaane masii noqon doontaan Idinka iyo kuwa Idinka dambayn doona Niman Naf iyo wanaag uga kordhaan balse Nusqaan ayaaba idiinka kordhaysa, Aakhirana waa la Idin weydiin doona Burburka ka dhasha.
Caleemo saarkiina aad warbaahinta mariseena dib u dhigta sababta oo ah Khilaafka jira awgii iyo xanuunkan Dunida saameeyey oo Marti ka soo Qayb-gashaaba ay yaraan doonto ee ah kala cararka (Covid-19) markaa Suldaanka Maanta Solomadow kooxi doorato ma qaadanayo Magaca Suldaan ee wuxuu Qaadayaa magaca xanuunkan (Covid-19) oo ah Kala carara, Maadaama uu Beeshii Solomadow kala diray.
2.Dhamaan waxaan ka Codsanayaa dhalinyarada ka shaqaysa TV-yada iyo Warbaahinta Madaxa banaan iyo inta kale ee soo Bandhigaysa Muuqaalo iyo Warbixin inay usameeyaan soo Tebintooda si Farsamo ah (professionally) oo ay bedelaan Qaabkan iminka mikrofoonka dadka oo dhan lagula wareegayo oo wax aad kasoo baaraan degteen soo daysaan Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa wax rag ku heshiiyay Nin ma odhan waayo.
Waxaad maqashaan Gobolka Buuhoodle ama Buuhoodle oo keliya marar badan. Solomadow waxaa la gudboon Deegaankeeda sidii ay u midayn lahayd waayo waa reer kooban Degaankooduna kooban yahay isla markaana saddex Gobol kula jira waa muhiim Arrintaasi oo waxaaba la odhan karaa waaba Arrinta koowaad ee u baahan in laga Hawl-galo sidii aynu umidayn lahayn Degaankeena oo ugu yaraan laba Gobol kusoo ururimo ama Deegaanka Qorilugud u raadino sidii uu Gobol u noqon lahaa Gobol iskii u taagan laakiin waxaa ka horeeya midnimo shacabka ah iyo Deegaanka oo aynu horumarino.Maxamed Cilmi Cali (Maxamed Cilmi Dhuub) Norway.